Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynihii koobaad ee Isbaahaysiga shacabka xoriyada iyo dimuqraadiyada ee PAFD oo maalintii Afraad galay
Shirwaynihii koobaad ee Isbaahaysiga shacabka xoriyada iyo dimuqraadiyada ee PAFD oo maalintii Afraad galay
Posted by Daljir	/ March 24, 2016
Waxaa si haboon uga socda caasimada wadanka Eritrea ee Asmara shir-waynihii koobaad ee Isbaahaysiga shacabka xoriyada iyo dimuqraadiyada ee PAFD.
Shirkan oo ay ka soo qayb galeen dadwayne aad u badan oo isugu jirtay, wafuuda ka socota shanta urur ee isbaahaysigani ka kooban yahay, duplamaasiyiin iyo marti sharaf kale ayaa ku socda jawi aad u wanaagsan oo dhamaanba ay ku qanceen kasoo qayb galayaasha shir waynahan.
Waxaana laga soo jeediyey shirkan khudbado ku saabsanaa hawlaha isbaahaysiga, xaaladaha geeska Afrika, gaar ahaan, mida Itoobiya iyo guud ahaanba caalamka.
Hadaba shirwaynaha isbaahaysiga oo maalintii afraad galay, waxaa horyaalay qodobo badan, oo ku saabsanaa qaab-dhismeedka Isbaahaysiga iyo shuruucdii uu ku hawl gali lahaa, waxaana la sameeyey lix kooxood oo dib u fiirin iyo sixitaan ku samaysa shuruucdii qabyada ahayd ee isbaahaysiga.
Dood dheer,falanqayn iyo fikir iswaydaarsi kadib, waxaa si buuxda loo ansixiyey dukumantigii rasmiga ahaa ee Isbahaysiga iyo shuruucdiisa.
Qaabdhismeedkii ururka stratajiyadii iyo qorshayaashuu ku shaqan lahaa isbaahaysigu.
Intaas kadib, waxaa la soo bandhigay qaabdhismeedkii ururka oo ka kooban Gudoonka ururka iyo gudiga fulinta.
Gudoonka ururku wuxuu ka kooban yahay shan xubnood;
Gudoomiye ku xigeenka koowaad
Gudoomiye ku xigeenka labaad iyo laba xubnood oo kale oo ka mid ah gudoonkaiga Isbahaysiga.
Wuxuu ka kooban yahay shan xafiis oo kala ah;
-Xafiiska siyaasada iyo arimaha ururka.
-Xafiiska xidhiidhka caalimiga ah & arrimaha dibada.
Iyo Xafiiska War-faafinta & Xidhiidhka.
Dhamaanba xubnaha gudoonka ururka iyo gudiga fulintu waxay ka kooban yihiin 30 xubnood oo urur kastaa oo isbaahaysigan ka mid ahi uu ku leeyahay 5 xubnood.
Waxaa intaas dheer oo la sameeyey xafiiska xogahaynta oo isaguna ka kooban shan xubnood oo urur kastaa ku leeyahay xubin.
Sidoo kale waxaa la la go’aan saday in la sameeyo ururo bulsho oo isbaahaysigu yeesho sida ururada dhalinyarada iyo haweenka.
Sikastaba ha ahaatee, shirwaynahan oo waxyaabo badan lagu lafa guray islamarkaasna maraya heer gabo gabo ah ayaa maalinta bari ah uu qorshuhu yahay hadiii alle idmo,in la qabto xafladii lagu soo xidhi lahaa shirwaynahan.
Waxaana xafladaas lagu marti qaaday duplamaasiyiin, ururo caalami ah iyo marti sharaf sare.
Kala Soco ONA wararka dheeriga ah & go’aamada ka soo bixi doona shir waynahan Isbahaysiga PAFD.